Mpitantana ny distrika
Natolotr'ilay namana akaiky i Arvin. Ny toetra amam-panahiny dia azo lazaina ho hatsaram-panahy, tapa-kevitra, ary manaja ny fahaiza-mifandray aman'olona izay tsy misy ao amin'ny tsenam-barotra UAE. Hanaraka anao izy isaky ny dingana rehetra ary mbola misy foana ireo fanontaniana mety ho azonao. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana maro dia afaka hanome anao vahaolana tsara indrindra izy. Noho ny fanandramana niainako dia mety manoro hevitra azy aho na oviana na oviana ary hampiasa ny serivisiny sahaniny mandritra ny taona maro ho tonga amin'ny fitantanana ny fanananay rehetra!
Avy amin'i: Sander de Bruijne
Misaotra anao izahay noho ny mahita anay karazana trano izay tena tadiavinay amin'ny toerana tsara indrindra. Hatramin'ny nanombohana anao dia nanome toky izahay fa hahomby ianao ary azo antoka fa nanao ilay milina fanampiny ianao mba hanafahana an'io fampanantenana io. Ny fomba fanaonao dia manokana, miteraka lanjany ary tena mangarahara. Misaotra anao amin'ny fianakaviana sambatra ao amin'ny trano tsara tarehy.
Hello, ny anarako dia Greg Turnbull, vao novidiko ny fananana Emaar ao amin'ny fivoaranao Claren ao Downtown Dubai. Tsy maintsy nandefa mailaka momba ny mpandraharaha mahazatra anao Hend Karam aho. Manana toetra manerana an'izao tontolo izao aho, ary tsy nahita velively ny tolotra fakan-tserasera azoko avy amin'ny Hend.Hiana dia nivezivezy ary mihoatra noho ny zavatra takiana amin'ny maha-tompony azy ho toy ny mpandraharaha ara-barotra - tsara lavitra. Nosamboriny aho ary namela ahy tany amin'ny seranam-piaramanidina, dia teo amin'ny finday foana no nangatahiko, ary namaly mailaka avy hatrany. Io fifandraisana manokana io miaraka amin'ny fahaiza-manaony, dia mametraka an'i Hend an-tendrony ao an-tsaiko. Hanoro hevitra an'i Hend ny mpiara-miasa amiko ao Al Jazeera aho, raha misy mieritreritra ny hividy trano any Dubai. Tsara ny Provident Real Estate amin'ny fisakanana ity vehivavy tokana tsy manam-paharoa ity, ary misaotra anao Hend noho ny fanampianao rehetra!
Nividy trano aho tamin'ny alalan'ny Swati avy amin'ny Provident Real Estate tao amin'ny Golden Mile 6 teo amin'ny Palm. Te-hankasitraka azy aho amin'ny fanatanterahana io dingana io ho mora sy mora ho anay, tena matihanina izy tamin'ny fotoana rehetra navotsotry ny fampanantenana rehetra ary nanao ny zava-drehetra tamin'ny fotoan-tsarotra, noraisiny ny halalin'ny fandoavam-bola ho antsika izay tena marina izay nilainay. Ny fahalalany ny tsenam-bola ao Dubai dia tena nanampy anay tamin'ny fanontaniana sy fanontaniana nananantsika nandritra ny dingana. Afaka nifandray tamin'ny fotoana rehetra izy ary nahafinaritra foana ny fangatahana nataonay. Manasa tsara ny Swati aho raha mividy na manofa trano any Dubai ianao.
Avy amin'i: Carl van Rosenveldt